Australian Labradoodle: လူတိုင်းကိုဤမွေးရာပါကိုချစ်ခင်စေသောမယုံနိုင်ဖွယ်အချက်အလက်များ - Breeds
Australian Labradoodle: လူတိုင်းကိုဤမွေးရာပါကိုချစ်ခင်စေသောမယုံနိုင်ဖွယ်အချက်အလက်များ
ခင်ဗျားမေးတာကိုကြားရတဲ့နောက်ဒီဇိုင်းပညာရှင်နောက်တစ်ယောက်ကတော့သြစတြေးလျ Labradoodle နဲ့ဘာကွာခြားတာလဲ။
ဒါကိုကြားရတာသင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ် လူအများစုက Labradoodle ဟုသိကြသည် တကယ်သြစတြေးလျ Labradoodle လား
တကယ်တော့, သြစတြေးလျ Labradoodle ပင်၌မဆိုသြစတြေးလျရှိသည်ပါဘူး! သူ၏နာမသည်သူစတင်ခဲ့သည့်နေရာမှလာသည်။
သူသည်visစတြေးလျလမ်းပြခွေးန်ဆောင်မှုများမှခွေးများနှင့်မတည့်သောအမြင်အာရုံချို့တဲ့သောမိသားစုများအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံး hypoallergenic လမ်းညွှန်ခွေးဖြစ်ရန်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။
ဤလှပသောခွေးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိလိုသည့်အရာအားလုံးကိုလေ့လာလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏မယုံနိုင်စရာအချက် ၂၁ ကိုဆက်ဖတ်ပါ။
၁။ သြစတြေးလျား Labradoodles သည်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသည်
၂။ ပထမ ဦး ဆုံးသူတို့ကသွန်းလောင်းခြင်းမရှိသောလမ်းညွှန်ခွေးအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်
၄။ သြစတြေးလျ Labradoodle သည်ပြီးပြည့်စုံသောမိသားစုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်း
၆။ သြစတြေးလျ Mini Labradoodle ရှိတယ်
11. ဒီဒီဇိုင်နာ Pooch အလွန်လေ့ကျင့်သင်ကြားသည်
၁၃။ Labစတြေးလျနိုင်ငံ Labradoodle သည်အလွန်နည်းပါးသည်
သင့်ရဲ့ခွေးကလေးရဲ့မျိုးဆက်ကိုမေးပါ ဘာလူမှုရေးအစီအစဉ် သူတို့ကအရပျ၌ရှိ။ ထိုအရပ်မှသင်၏ခွေးနှင့်အတူဆက်လက်။
ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောလူတို့အား၎င်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါ။ ဦး ထုပ်များ၊ အင်္ကျီများ၊ အခြားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ပြုပါစေ၊
TO သို့ ကောင်းစွာသြစတြေးလျ Labradoodle socialized ကလေးများပါ ၀ င်သည့်လူအများစုက၎င်းတို့အားအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မွေးရန်နှင့်ချစ်လိုသောကြောင့်အရေးကြီးသည်။
ယခုမျိုးဆက်သည်အနည်းဆုံးအနှစ် ၃၀ ကြာပြီဖြစ်သည်။
Labradoodle ဘာကြောင့်ကြီးထွားလာတာလဲဆိုတာမှတ်မိသေးတယ်။ non- သွန်းလောင်းလမ်းညွှန်ခွေးအဖြစ် ? ကောင်းပြီကြောင်းအမှန်တကယ်သြစတြေးလျဖောက် (ဆိုလိုဒီခွေး) ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၉ တွင်မွေးမြူရေးမန်နေဂျာဝေါလီကွန်ရုန် သြစတြေးလျရှိခွေးဝန်ဆောင်မှုကို ခွေးများနှင့်မတည့်သောအမြင်အာရုံချို့တဲ့သောမိသားစုအတွက်ခွေးပေါက်စများထုတ်လုပ်သည်။
Poodles ကို Labrador Retrievers ဖြင့်မွေးမြူရန်ကြိုးစားပြီးနောက်သူသည်ခွေးကလေးကိုဓာတ်မတည့်သည့်ဖော်ရွေသည့်အင်္ကျီဖြင့်မွေးထုတ်ခဲ့သည်။ အများပြည်သူနှင့်အတူဒါရေပန်းစား ။
သြစတြေးလျ Labradoodle သည် Labrador တစ်ခုထက်ပိုသည် တစ် Poodle နှင့်အတူကူး ၎င်းတွင်ဘိုးဘေးများစွာရှိသည်။
ရရန် စမတ်နှင့် trainable ခွေး ယခုတွင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းအမေရိကန်နှင့်အင်္ဂလိပ် Cocker Spaniels ကိုအိုင်ယာလန်ရေ Spaniels နှင့် Wheaten Terriers နှင့်အတူရောနှောပစ်လိုက်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသောစံ Labradoodle သည်အခြားပုဒ်မများပါ ၀ င်သည့် Poodle နှင့်အတူဖြတ်ကျော်ခဲ့သော Labrador တစ်ခုဖြစ်သည်။
စိတ်ထားအကြောင်းပြောရရင်နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့သြစတြေးလျ Labradoodles ဟာယေဘုယျအားဖြင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးမျှတပါတယ်။
သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ Poodle နဲ့ Spaniel ဘိုးဘေးတွေဆီကထောက်လှမ်းရေးနဲ့လေ့ကျင့်နိုင်စွမ်းကိုအမွေဆက်ခံပြီးသူတို့ရဲ့ Labrador ဘိုးဘေးတွေဆီကနေစိတ်အားထက်သန်မှု၊
ဒီခွေးအဖြစ် ရင့်ကျက်ဒီဇိုင်နာ Cross- ဖောက် နှင့်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်န်းကျင်ခဲ့, သူတို့ရဲ့စိတ်ထားမကြာခဏကြိုတင်ခန့်မှန်းသည်။
သူတို့၏ရှည်လျားသောမွေးမြူရေးကာလသည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောမျိုးဆက်များကိုသာမျိုးပွားသင့်သည်ကိုဆိုလိုသည် အဆင်သင့်စိတ်ထားခွေးကနေ ။
မျိုးဆက်ပွားများနှင့်အတူခန့်မှန်းရခက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပထမမျိုးဆက် (F1 အဖြစ်လူသိများ) နှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ခွေးကလေးအားအမွေဆက်ခံမည့်မည်သည့်လက္ခဏာများကိုသင် ၁၀၀% မသေချာသော်လည်းနောက်ပိုင်းမျိုးဆက်များသည်ပိုမိုတည်ငြိမ်သောခွေးများကိုမွေးထုတ်သည်။
အများဆုံး Poodle ရောသမမွှေများလိုပဲ ၎င်းတို့ကိုယေဘူယျအားဖြင့်ဖော်ပြထားသည် -
ဤကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားမူကွဲ, ကွဲပြားခြားနားသောကြီးထွားမှုနှုန်းရှိသည် နှင့်ရင့်ကျက်အချိန်ဇယား:
သေးသေးလေးများသည် 14-16 14 မှအမြင့် 15-15 ပေါင်ကြားရှိသည်
အလတ်စားခွေးများသည် ၁၇-၂၀ between အကြားရှိပြီးအလေးချိန် ၂၈-၄၄ ပေါင်ကြားရှိသည်
၃ ခုတွင်အကြီးမားဆုံးမှာစံဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အမြင့် ၂၁ မှ ၂၄ between အကြား၌ရှိပြီးအလေးချိန် ၅၀-၆၆ ပေါင်ကြားမည်ဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျ Labradoodle ဟာသူတို့ရဲ့ချောကလက်အမွေးကူထားတဲ့အတွက်ကျော်ကြားလာတယ်။
၎င်းတို့သည် Poodles သို့မဟုတ် Labradors လုပ်သည့်မည်သည့်အရောင်မျိုးမဆိုရသော်လည်းများသောအားဖြင့် -
သူတို့က သူတို့ရဲ့ fleecy အင်္ကျီကိုလူသိများ (ဤသည်ဖြစ်စေဖြောင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လှိုင်းတံပိုးဖြစ်လိမ့်မည်) နှင့်အချို့သောသိုးမွှေးအမျိုးအစားကုတ်အင်္ကျီရှိသည်ဖို့လူသိများကြသည်။
ဒီခွေးတွေရှိနိုင်တယ် အမှတ်အသားတစ်ခုအကွာအဝေး ပါဝင်သည်:
အနိုင်အထက် - ရင်ဘတ်နှင့်ခေါင်းပေါ်တွင်အဖြူရောင်ပုံစံနှင့်မကြာခဏသူတို့၏ခြေချောင်းများသို့မဟုတ်ခြေချောင်းများ။
သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အနည်းဆုံး ၅၀% သည်အဖြူရောင်ဖြစ်သည်
Café and Parchment - မှေးမှိန်သောချောကလက်
သြစတြေးလျ Labradoodle ကတကယ်တော့မရှိပါ မည်သည့်သြစတြေးလျဝတ်ရည် သူ၌, အမည်ရိုးရှင်းစွာသူအစပြုရာမှလာသည်။
ကျနော်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, သြစတြေးလျ Labradoodle Cross- မွေးမြူရေး၏အစဉ်အဆက်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည် သော purebred ခွေးများပါဝင်သည် Labrador Retriever, Poodle နှင့်အမေရိကန်နှင့်အင်္ဂလိပ် Cocker Spaniels တို့ဖြစ်သည်။
Poodles အလွန်ဖြစ်ကြသည် လူတွေ -oriented ခွေး ဆိုလိုတာကသူတို့ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်အားထက်သန်တယ်။ သူတို့သည်အပြုသဘောဆောင်သောလေ့ကျင့်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ပြီးသွက်လက်ခြင်း၊
American Cocker Spaniel သည်ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်လိမ္မာပါးနပ်ခြင်းကြောင့်ကျော်ကြားသော်လည်းအင်္ဂလိပ် Cocker Spaniel သည်၎င်း၏စွမ်းအင်နှင့်လေ့ကျင့်နိုင်မှုကြောင့်ချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရသည်။
အိုငျးရစျ Water Spaniel သည်အပျော်ကစား။ အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ပြီးသူတို့၏အင်္ကျီနှင့်အရွယ်အစားကိုလည်းရောနှော။ ယူဆောင်လာဖွယ်ရှိသည်။
soft coated ဂျုံ Terriers များအတွက်ချစ်ကြသည် သူတို့ရဲ့အနိမ့်သွန်းအင်္ကျီ နှင့်လှပပျော့ပျောင်းသော wavy အင်္ကျီ။ Wheaten terrier များသည်မိသားစုကိုအကြွင်းမဲ့ချစ်ခင်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ကြသည်။
မွေးမြူသူများကLabစတြေးလျ Labradoodle သည်အပတ်စဉ် ၅-၆ ပတ်တိုင်းတွင်အလှည့်ကျအလှပြင်ဆိုင်သို့တက်ရောက်သင့်ကြောင်း၊ နေ့စဉ်အိမ်ကြားတွင်အိမ်၌နေစေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထူထဲ။ ထူထပ်သောကုတ်အင်္ကျီကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤ pooch သတို့သားလောင်းခံရဖို့လေ့ရရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သူသည်အထွotting်အမြတ်ထားခြင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်းများဖြစ်သဖြင့်သူတို့၏အင်္ကျီကိုကောင်းစွာစီမံနိုင်လျှင်သူတို့အတွက် ပို၍ အဆင်ပြေသည်။
ပိုင်ရှင်အချို့သည်သူတို့၏အင်္ကျီများကိုအနည်းငယ် ပို၍ နှစ်သက်ကြပြီးအချို့ကမူတိုတောင်းလိမ့်မည်။ တိုတောင်းသောအင်္ကျီများသည်အိမ်တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းသည်။ ဒါပေမယ့်များစွာသော doodles လိုပဲ , အစိုင်အခဲဖြီးလိမ်းပုံစံမရှိသေးပေ။
ဖြီးလိမ်းပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏သွားများကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ၊ တစ်ပတ်အကြာတွင်သန့်ရှင်းစွာထားရန်၊ သူ၏မျက်လုံးများနှင့်နားရွက်များကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးရန်လိုလိမ့်မည်။ သူ၏ခြေသည်းများကိုလည်းမမေ့ပါနှင့်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့ထုတ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်မျိုးဆက်စဉ်ဆက်သော်လည်း ကောင်းစွာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန် -to- ကျေးဇူးပြု pooch ပိုင်ရှင်တွေ scot- အခမဲ့ကွာမရကြဘူး။
သငျသညျအစဉ်အမြဲတာဝန်ရှိသည် ခွေးပြုစုပျိုးထောင်, လူမှုရေးနှင့်လေ့ကျင့် !
သင်မြင်ချင်သောအပြုအမူကိုအားပေးပါ - ခွေး၏အပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များကိုလေ့လာပါ။ မလိုချင်တဲ့အပြုအမူကိုလျစ်လျူရှုပါ alpha သို့မဟုတ် aversive နည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာ။
ယခုငါတို့သြစတြေးလျ Labradoodle ၏ဖန်တီးမှုတွင်တစ်ချိန်ချိန်အသုံးပြုခဲ့ကြသူမျိုးဆက်များ၏အကွာအဝေးဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကကောက်ကောက် coated retriever လိုင်းများသို့ရပ်ကြီးခဲ့သည်ကိုငါတို့သိကြ၏။ အဘယ်အရာကိုမကြိုက်သည်ကိုမူရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးသော်လည်းဤထပ်တိုးမှုမှာကြာရှည်မခံပါ။
Poodle ရောစပ်မှုအများစုလိုပဲဒီခွေးဟာမွှေးကြိုင်နေသည် တစ် hypoallergenic ခွေးအဖြစ် - ဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသောဓာတ်မတည့်မှုသည်လုံး ၀ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိရန်အာမခံချက်မရှိပါ။
သူတို့ရဲ့ကုတ်အင်္ကျီအနိမ့်သွန်းခြင်းနှင့်ကောက်ကောက် / လှိုင်းတံပိုးသည်, ဒီ dander အဖြစ်အလွယ်တကူအိမ်ပတ်ပတ်လည် float ပါဘူးအင်္ကျီအတွင်းပိတ်မိနေသည်ဆိုလိုသည်။
ဒီကံကောင်းသူအနည်းငယ်အတွက်ဒီမျိုးပွားကပေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်၊ အချစ်စွမ်းရည်နှင့် hypoallergenic တွေပါလိမ့်မယ်။
သို့သော် လူသားများသည်ခွေးတံတွေးနှင့်မတည့်ပါ ထို့ကြောင့်နိူင်ငံခြားဓာတ်မတည့်သည့်ခွေးတစ်ကောင်မျှလုံခြုံစိတ်ချရသောရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ - ခွေးများအားလုံးတွင်တံတွေးရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သြစတြေးလျား Labradoodle ကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၊ သမိုင်းကြောင်းအရဂုဏ်သိက္ခာရှိသောမျိုးဆက်ကိုသင်ရှာဖွေသင့်သည်။
သင်ကျန်းမာသော Doodle ရရှိရန်မိဘနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကြံပြုထားသောကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်သင့်သည်။
တင်ပါးနှင့်တံတောင်ဆစ် - အဆစ်များတွင်မည်သည့်မူမမှန်ကိုဖော်ထုတ်ရန် X ရောင်ခြည်များကိုထုတ်ယူသည်။ ညံ့ဖျင်းသောရမှတ်များဆိုလိုပါလိမ့်မယ် ခွေးမွေးမြူမရသင့်ပါတယ် ။
မျက်လုံးစမ်းသပ်ခြင်းများ - တိုးတက်သော retinal atrophy အပါအ ၀ င်မျက်လုံးများတွင်မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းနှင့်မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းမရှိသောအခြေအနေများကိုဖယ်ထုတ်ရန်စစ်ဆေးစစ်ဆေးခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။
von Willebrand ၏ရောဂါနှင့်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းသွား Myelopathy အပါအဝင်များစွာသောအခြေအနေများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြဲမြံစေရန် DNA ကိုစမ်းသပ်မှုများထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည် - သာရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွေးကနေမွေးမြူသင့်သည်။
အထက်ပါစမ်းသပ်မှုများရှိသော်လည်းအချို့သောခွေးများသည်သင့်အားလုံးဝကျန်းမာသောခွေးတစ်ကောင်ကိုအာမခံချက်မပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်ပိုက်ကွန်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဒီဖောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးအများဆုံးကျန်းမာရေးပြissueနာဖြစ်ပါတယ် လေ့ကျင့်ခန်းသွေးဆောင်ပြိုကျ ။
စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားကိုတစ်နေ့လျှင်ကယ်လိုရီ ၁၅၀၀ ၀ န်းကျင်တိုက်ကျွေးသင့်သည်။
သင်၏ pooch အားသူ၏နေ့စဉ်အာဟာရလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောအရည်အသွေးရှိသောအစားအစာများကိုကျွေးမွေးပါ။ အထူးသဖြင့်ပရိုတိန်းနှင့်အဆီ။
ပရိုတိန်းသည်ဆဲလ်ကြီးထွားမှု၊ ပြုပြင်မှုနှင့်လည်ပတ်မှုအတွက်အရေးပါသည်၊ အဆီသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့မျိုးပွားမှုအရွယ်အစားဟာအရွယ်အစားသေးငယ်တယ်၊ အလယ်အလတ်တန်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်သင်သူ့ကိုခွေးတစ်ကောင်အဖြစ်အစာကျွေးတဲ့အတိုင်းအရွယ်အစားကိုသိဖို့လိုတယ်။ မိမိအခန့်မှန်းအရွယ်ရောက်အရွယ်အစားပေါ်တွင်မူတည်သည် ။
သြစတြေးလျ Labradoodle ဖြစ်ခဲ့သည် ရွေးချယ်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရပ်ကြီး မည်သည့်မိသားစုအတွက်မဆိုညီညွတ်မျှတသော၊
သူတို့ကိုမည်သည့် Kennel Club မှအသိအမှတ်မပြုပါ။ လက်ရှိမျိုးဆက်များသည်နောက်ဆုံးတွင်စင်ကြယ်သောမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်စဉ်းစားမည်မထင်ပါ။
သင်ဤယောက်ျားတစ် ဦး စဉ်းစားလျှင်နာမည်ကြီးမျိုးဆက်များမဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်။
စုံလင်သောမိသားစုအဖော်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏ဉာဏ်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကသူတို့ကိုလေ့ကျင့်ရန်အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ကလေးငယ်များအတွက်ကစားနိုင်သော်လည်းကလေးငယ်များအတွက်တူညီသောနူးညံ့သိမ်မွေ့မှု - သင်အမှန်တကယ်မလိုချင်ပါ ပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောယဉ်ကျေး pooch !
အစောပိုင်းနှင့်ဆက်လက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့်လေ့ကျင့်မှုပေးခြင်းဖြင့်သင့်အားပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောကံကောင်းသူတစ် ဦး ရှိလိမ့်မည်။ ဒီဖောက်မကြာသေးမီကဝယ်ယူ? ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ကမှတ်ချက်ချန်ထားပါ။
အိုင်ယာလန်ခွေးနာမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ - Éireမှ 200+ ရိုးရာအမည်များ
8 Border Collie ရောနှောခြင်း: သင်၏ A မှ Z သည် Collie ရောနှောသောမျိုးဆက်များလမ်းညွှန်
borderစတြီးယားသိုးထိန်းတစ်ဝက်နယ်စပ် collie တစ်ဝက်
black lab နှင့် rottweiler ရောစပ်သည်